Etu ị ga - esi malite Podcast Maka Azụmaahịa Gị (Site na Ihe Mmụta Mụtara n'aka M!) | Martech Zone
Mgbe m bidoro pọdkastị m ọtụtụ afọ gara aga, enwere m ihe mgbaru ọsọ atọ dị iche:
Njikwa - site na ndi ndu ndi isi okwu n’ulo oru m, achoro m ime ka a mara aha m. O doro anya na ọ rụpụtara ma duga ụfọdụ ohere dị ịtụnanya - dị ka inyere ndị na-akwado ndị pọdkastị Dell's Luminaries aka nke mere ka 1% kachasị pọdkastị gere ntị n'oge ọ na-agba ọsọ.
atụmanya - Adịghị m eme ihere maka nke a… enwere ụlọ ọrụ ndị m chọrọ ịrụ ọrụ n'ihi na ahụrụ m ọdịbendị dabara n'etiti atụmatụ m na nke ha. Ọ rụrụ ọrụ, mụ na ụfọdụ ụlọ ọrụ dị ịtụnanya na-arụ ọrụ, gụnyere Dell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Angie's List… na ndị ọzọ.
Voice - Dika pọdkastị m na-eto, o nyere m ohere isoro ndị isi ndị ọzọ nọ n’ụlọ ọrụ m kọwaa ihe ngosipụta ma tolite ma amachaghị nke ọma. Adịghị m eme ihere na achọrọ m ime ka pọdkastị ahụ tinyekwuo ọnụ ma dị iche iche iji melite ọhụhụ ya wee rute.
Nke ahụ kwuru, ọ dịghị mfe! Ihe mụtara:
mgbalị - mgbalị iji nyocha, mepụta, bipụta, ma kwalite ọdịnaya ahụ na-ewe ogologo oge karịa ịme ajụjụ ọnụ ahụ. Yabụ pọdkastị nkeji iri abụọ nwere ike were elekere 20 ruo 3 nke oge m iji kwadebe ma bipụta ya. Oge ahụ dị oke nkpa n’usoro oge m, o mekwara ka ọ na-esiri m ike ijide onwe m.
ọkụ - Dịka ịde blọgụ na soshal midia na-arụ ọrụ, otu ahụ ka pọdkastị na-eme. Ka ị na-ebipụta akwụkwọ, ị nweta mmadụ ole na ole. Na usoro a na - eto ma na - eto… ya mere ike dị oke mkpa maka ọfụma gị. M na-echeta mgbe m nwere otu narị na-ege ntị, ugbu a, m nwere iri puku kwuru iri puku.
Planning - Ekwenyere m na m nwere ike ịbawanye oke m ma ọ bụrụ na m dịkwuo ụma na nhazi oge nke Podcast m. Ọ ga-amasị m ịmepụta kalenda ọdịnaya ka, n'ime afọ ahụ, m lekwasịrị anya n'otu isiokwu. Cheedị echiche Jenụwarị Ọktoba ịbụ ọnwa e-commerce nke mere na ndị ọkachamara na-akwado maka ọbịbịa na-abịanụ!
Gịnị kpatara azụmahịa gị kwesịrị iji bido Podcast?
N'èzí ihe atụ ndị m nyere n'elu, enwere ụfọdụ ihe na-akpali akpali ọnụ ọgụgụ na doo Podcast na-eme ka ọ a ọkara kwesịrị ịgagharị.
37% nke ndị bi na US gere pọdkastị n'ọnwa gara aga.
63% nke ndị mmadụ zụtara ihe Podcast ọbịa kwalite na ihe ngosi ha.
Site na 2022, a na-eme atụmatụ na ige ntị Podcast ga-eto ruo nde mmadụ 132 na United States Naanị.
Businessfinancing.co.uk, ego azụmahịa, na agbazinye nnyocha na ozi weebụsaịtị nkwusa na UK, na-arụ ihe ịtụnanya ọrụ na-eje ije gị site na ihe niile ị chọrọ iji nweta gị Podcast elu. Ihe omuma, A Small Business Guide to Malite Podcast na-ejegharị site na usoro ndị a dị oke egwu… ijide n'aka na ị pịa site na post ha ebe ha gbakwunye ụda akụ!
Họrọ a isiokwu naanị ị nwere ike ịnapụta… ijide n'aka na ị chọọ iTunes, Spotify, SoundCloud, na Google Play iji hụ ma ị nwere ike ịsọ mpi.
Nweta ikike okwu. Lelee m ulo ihe omumu na nkwanye akụrụngwa ebe a.
Mụta otu esi edit gị Podcast iji edezi software dị ka Ọdịdị, Garageband (Mac naanị), Adobe nku (biara na igwe okike okike nke okike). E nwekwara ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke nyiwe na ngwa ntanetị n'ịntanetị!
Dekọọ pọdkastị gị ka video ya mere inwere ike bulite ya na Youtube. Ọ ga-eju gị anya mmadụ ole ege na Youtube!
na- mba kpọmkwem wuru maka pọdkastị. Pọdkastị buru ibu, faịlụ gụgharia na sava weebụ ị na-ahụkarị ga-akpagbu na bandwit dị mkpa.
Anyi nwere edemede miri emi banyere ebe aga nnabata, syndicate, na-akwalite gị Podcast na nkọwa niile nke ndị agha dị iche iche, syndication, na channelụ nkwalite ị nwere ike iji.
Ọzọ na-aga na-enyemaka m (na oké Podcast) bụ Brassy Mgbasa Companylọ Ọrụ. Jen enyerela ọtụtụ puku folks aka ịmalite ma wuo usoro Podcasting azụmaahịa ha.
Oh, ma hụ na ịdenye aha na Martech Zone Ajụjụ Ọnụ, m Podcast!
Tags: esi malite Podcastndezi Podcastndị editọ Podcastigwe okwu PodcastpọdkastịPodcast azumAtụmatụ PodcastAtụmatụ Podcastingmalite pọdkastị